2020 - Khit Minnyo
the Kali Linux - Hacker တွေ အသုံးများဆုံး OS - Part 4
2.0. the Kali's Look
Kali ရဲ့ အသွင်အပြင်ကို History ကြည့်တဲ့အခါ Major Changes တွေ လုပ်ခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒါတွေထဲကမှ လူတိုင်း မြင်သာလွယ်တဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေကတော့ Desktop Environment တွေပါပဲ။ Desktop Environment လို့ ဆိုလိုက်တော့ Linux နဲ့ စိမ်းနေတဲ့သူတွေက ဘာလဲဟ လို့ မေးခွန်းထုတ်ကောင်း ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီစကားလုံးက လူတိုင်းနဲ့ ရင်းနှီးနေတာမှ မဟုတ်ဘဲလေ။ Desktop Environment ဆိုတာက Operating System ကြီးကို ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ လျင်မြန်လွယ်ကူစွာ အသုံးချနိုင်စေဖို့ စီမံထားတဲ့ GUI (Graphical User Interface) ကို ဆိုလိုတာပါ။ App တွေရဲ့ icon တွေ၊ Wall Paper တွေ၊ Toolbar တွေ၊ Desktop Widget တွေ အားလုံးပါတဲ့အတွက် ကြည့်ရတာ ပိုရှင်းသွားပြီး ဆွဲဆောင်မှုလည်း ပိုရှိလာပါတယ်။
Fig: 2.0. Backtrack's look
ပုံ ၂.၀ မှာ ပြထားတာကတော့ Kali ရယ်လို့ ဖြစ်မလာခင် မူလအစ ဖြစ်တဲ့ Backtrack Linux ပုံစံ ဖြစ်ပါတယ်။ Backtrack5အထိ ထွက်ခဲ့ပြီး Backtrack5မှာ သိပ်ကို နာမည်ကြီးခဲ့တာပါ။ ဒီမှာတော့ ဒီနေ့ခေတ်အထိတောင်မှ Backtrack5တင်ချင်နေသူတွေ အပုံလိုက် တွေ့နေရပါသေးတယ်။ စိတ်မကောင်းစရာပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Android Version 11 လောက် ဖြစ်နေချိန်မှာ သင့်အနေနဲ့ Android Version 1 ပဲရှိတဲ့ ဖုန်းကို သုံးဖို့ ကြိုးစားနေလို့ပါ။ Latest သုံးလို့ရပါလျက် ဟိုးအစကို ပြန်သွားချင်တာကတော့ တစ်နေ့ချင်းစီမှာတောင် ဒီလောက်ထိ တိုးတက်ပြောင်းလဲနေတဲ့ နည်းပညာခေတ်ကြီးမှာ ဘယ်လိုမှ အံမဝင် ခွင်မကျနိုင်မှာ သိသာလွန်းပါတယ်။ App တွေ install တာကအစပေါ့။ 😁
Fig: 2.1. Kali's Version 1 (Default Style)
Fig 2.1. ကတော့ Kali ရယ်လို့ စ ဖြစ်လာကာစ Kali 1.0.0 ကနေစပြီး 1.1.0a အထိ သုံးခဲ့တဲ့ ပုံစံပါ။ အဲသည် ကာလတွေမှာ Version တွေ တက်လာပေမယ့် ပြောင်းလဲမှု အနည်းငယ်စီပဲ ရှိခဲ့ပါတယ်။
Fig: 2.2. Kali's Version2(Default Style)
ပုံ ၂.၂. မှာတော့ Kali Version 2.0 ကနေ စပြီး ပြောင်းလဲသုံးခဲ့တဲ့ ပုံစံ ဖြစ်ပါတယ်။ 2019 အစောပိုင်းထိ သုံးခဲ့ပါတယ်။ GNOME Desktop Environment ကို စတင်ပြောင်းလဲခဲ့တဲ့ ကာလလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သုံးရတာ Android နဲ့ ဆင်သွားတဲ့အတွက် ခုချိန်အထိကို လူကြိုက်များဆဲ Desktop Environment ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါတွေက Default Desktop Environment တွေကိုသာ ဆိုလိုတာဖြစ်ပြီး KDE ကြိုက်သူက KDE version, XFCE, LXDE, e17, ... စသည်ဖြင့် မျိုးစုံ သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကို YouTube Movie လေးတစ်ခု တင်ပေးထားတာရှိပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားရင်ဒီအောက်မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ သတိပြုရမှာက ခုလက်ရှိမှာတော့ အဲလောက်အများကြီး မပေးထားတော့ဘူးဆိုတာပါပဲ။
Fig: 2.3. Kali's Now (2020.xxx) (Default Style)
ပုံ ၂.၃. မှာတော့ Kali ရဲ့ ခုလက်ရှိအထိ သုံးနေတဲ့ Default Style ကို မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ lightdm (XFCE4 Desktop Environment) ကို သုံးထားပါတယ်။ လက်ရှိ ဗားရှင်းအတွက် Install လုပ်စဥ်မှာ သင့်အနေနဲ့ ရွေးချယ်နိုင်တဲ့ Desktop Environment ၃ မျိုး ရှိပါတယ်။ (တင်ပြီးမှ ထပ်ပြောင်းလည်း ရပါတယ်) အဲဒီသုံးမျိုးက -
ဒီ ၃ မျိုးကို တစ်ခုစီအကြောင်း နည်းနည်းစီ ပြောပြပါမယ်။
XFCE4 (lightdm) ကတော့ RAM usage လည်း နည်းသလို Default Version လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Default Version တွေတိုင်းမှာ အားသာချက်တွေ ကိုယ်စီ ရှိကြတာမို့ ကျွန်တော်ကတော့ Default တွေကိုပဲ ပိုကြိုက်ပါတယ်။ RAM usage နည်းတဲ့အတွက် Specification နိမ့်တဲ့ ကွန်ပျူတာတွေမှာလည်းပဲ အဆင်ပိုပြေတယ်။ Hacking လေ့လာတာမျိုးအတွက် လေ့ကျင့်ဖို့ Labs တွေကို VirtualBox မှာ တင်သုံးတဲ့အခါ RAM ကို Virtual Machine တွေအတွက်ပါ ခွဲပေးရတာဖြစ်လို့ RAM သုံးစွဲမှု သက်သာတဲ့ lightdm ကတော့ ပိုသာတာ အမှန်ပါ။ XFCE (default) ရဲ့ အဓိကအကျဆုံး အားသာချက်ကတော့ kali-undercover-mode ပါ။ Undercover Mode ဆိုတာက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Kali ပုံစံကို Windows 10 လို အသွင် ဖြစ်သွားအောင် ချက်ချင်း ပြောင်းပေးနိုင်တဲ့ feature ပါ။
Fig: 2.4. Kali Undercover Mode
Kali (Default XFCE) ရဲ့ ဘယ်ဘက်အပေါ်ထောင့်က Kali Dragon Logo ကို နှိပ်လိုက်ရင် Application Menu ပေါ်ပါတယ်။ အဲသည်မှာ undercover လို့ ရိုက်လိုက်ရုံနဲ့ Kali Undercover Mode ကို ပုံပါအတိုင်း မြင်ရပါမယ်။ Fig: 2.4
Fig: 2.5. Kali Undercover Mode
Undercover Mode ထဲကို ဝင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ Windows 10 လို အသွင်ပြင်မျိုး ပြောင်းလဲသွားတာကို မြင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအချက်က လူအများရှိရာ Public Place တွေမှာ Kali ကြီးနဲ့ သုံးတဲ့အခါ ဖြစ်လာနိုင်မယ့် လူအများ သတိပြုမိခြင်းတွေကနေ ရှောင်နိုင်သလို အချို့ရုံးတွေလို Linux မြင်တာနဲ့ သဘောမကျဖြစ်တတ်တဲ့ နေရာတွမှာလည်းပဲ အဆင်ပြေပြ သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပုံထဲမှာ မြင်ရတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ ပါဝင်တဲ့ App တွေက ပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်လို့ ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်သုံးနိုင်ပါတယ်။ မြင်ကွင်းကိုပဲ Windows 10 စတိုင် ပြောင်းလိုက်တာပါပဲ။ ဒါကို ပြန်ပိတ်ချင်တဲ့အခါ Terminal (CMD icon) ကို နှိပ်ဖွင့်ပြီး kali-undercover off လို့ ရိုက်ထည့်လိုက်ရုံပါ။ Enter လိုက်တာနဲ့ ပုံမှန် Kali ပြန်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
GNOME ကတော့ ပြောခဲ့ပြီးသလို Android ဆန်တယ်။ Ubuntu ရဲ့ Default Style ဖြစ်တယ်။ RAM usage တော့ များပါတယ်။ RAM 4GB လောက်ပဲရှိပြီး Hacking လေ့လာဖို့ Virtual Labs တွေကို သုံးဖို့ စိတ်ကူးထားရင်တော့ GNOME ကို မေ့ထားလိုက်တာ ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။
KDE ကတော့ Windows နဲ့ ပုံစံ နီးစပ်တယ်။ တူညီတာမဟုတ်ပါဘူး။ RAM usage လည်း မများဘူး။ Ghost Theme တွေလို သိပ်လှတဲ့ ပုံစံတွေကို သုံးနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ သူ့ကိုလည်း သဘောကျသူများတယ်။ Kali Undercover Mode ကို သုံးချင်ရင်တော့ Default (XFCE) တစ်မျိုးတည်းသာလျင် ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အကြံပေးလိုတာကတော့ Default အတိုင်းသာ သုံးဖို့ပါ။ GNOME or KDE အစွဲရှိရင်တော့ ကိုယ်နဲ့ကိုက်ရင် သုံးနိုင်ပါတယ်။
Fig: 2.6. Application Menu
Kali Default ရဲ့ Application Menu ပါ။ Fig: 2.6 မှာ မြင်ရတဲ့အတိုင်း Tool တွေကို သက်ဆိုင်ရာအလိုက် စုပေးထားပါတယ်။ သူ့ရဲ့ look ကတော့ ဒီလောက်သိထားရင် လုံလောက်ပြီထင်ပါတယ်။
Fig: 2.7. Right Click Menu
Desktop က နေရာလွတ်ပေါ် Right Click နှိပ်တဲ့အခါ မြင်ရမယ့် ပုံပါ။ အဲသည်ကနေလည်းပဲ Application တွေကို ရွေးချယ်သုံးနိုင််ပါသေးတယ်။ ပြီးတော့ Desktop Settings ကနေ Desktop Background ပြောင်းတာ၊ Desktop ပေါ်က icon တွေကို size ပြောင်းလဲတာ စတာတွေကို ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
By KhitMinnyo on December 23, 20202comments:
By KhitMinnyo on December 09, 20203comments: